यस्तो थियो मदन भण्डारीले २९ वर्षअघि प्रस्ताव गरेको जबज (पूर्णपाठ) – Nepal Press
२०७८ जेठ ३ गते ८:२३
काठमाडौं । एमाले पंक्तिलाई भावनात्मक रुपमा जोडिरहने तीन मुख्य कुरा हुन्-मदन भण्डारी, सूर्य चिह्न र जनताको बहुदलीय जनवाद । यी तीन कुरालाई माओवादीले पनि अश्वीकार गर्न सकेन ।
आखिर एमाले पंक्तिलाई भावनात्मक रुपमा जोडिरहने जबज के हो ? घनश्याम भुसालले केही समयअघि ओली पक्षका धेरैले जबज नै नपढेको टिप्पणी समेत गरेका थिए ।
आखिर जबज के हो ? यसको विकास कसरी भयो ? जबजभित्र के के कुरा छन् ? २०४९ साल माघमा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव जननेता मदनकुमार भण्डारीले पेश गरेको जबजको ओरिजिनल भर्सन नेपाल प्रेसले इच्छुक पाठकका लागि जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रकाशित: २०७८ जेठ ३ गते ८:२३